5 bụ mbadamba Lenovo ọhụrụ maka ụdị akpa niile | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Lenovo, Mbadamba gam akporo
Mbadamba gam akporo abụghị ihe na-akpali akpali dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka smartphones ha. Ọ bụ ezie na enwere ụlọ ọrụ ndị na-aga n'ihu ịmalite mbadamba dịka ise ọhụrụ ahụ sitere na Lenovo. N'etiti mbadamba Lenovo 5 ndị ​​ahụ, anyị na-ahụ ọkwa abụọ dị iche na ha. Fọdụ ga-abụ maka ụlọ na ezinụlọ, ebe ndị ọzọ na-ezube oke ọnụ ahịa.
Thatbụ na ọ nwere ike, anyị nwere usoro ọzọ Ngwaọrụ gam akporo nwere nnukwu ihuenyo na-enwe obi ụtọ maka ọdịnaya ọdịnaya, na-egwu egwuregwu ejiji ma ọ bụ naanị iji pen anyị nwere n'ụlọ sere ya. Ka anyị hụ ihe mbadamba nkume ise ọhụrụ a nke akara ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama PC na laptọọpụ gbasara.
1 Lenovo Tab E7, Tab E8 na Tab E10
2 Lenovo Tab M10 na Tab P10 maka ezinụlọ
Lenovo Tab E7, Tab E8 na Tab E10
Site na usoro nke mbadamba nkume atọ anyị nwere Tab E7 dị ka onye mbụ na-abịa na gam akporo Go Edition. Ugbu a, anyị nwere ike ịghọta ọnụahịa ya nke ọma, nke ahụ bụ na maka $ 70 ị nwere ike nweta otu. Igodo nke Tab E7 bụ atọ: ọkụ ọkụ, ọtụtụ nchekwa dị n'ime ma melite arụmọrụ ka mma. Anyị ga-ahụ ha na ọnọdụ iji mara n'ezie ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnweta ahụmịhe kachasị mma nke onye ọrụ ma ọ bụghị naanị ịnọ na ụfọdụ karịa ebumnuche nkịtị.
Ejiri Tab E7 mara a mkpebi kacha nta nke 1040 x 600 maka ihuenyo 7 sentimita asatọ, ihe nwere ike ịbụ ụkọ na nke na-egosi nke ọma ihe gam akporo Go Edition pụtara. Anyị na-ekwukwa maka igwefoto azụ 2MP na kamera n'ihu VGA nke 0.3 MP. N'ime obi ike anyị na-ahụ mgbawa MediaTek MT8163B kụrụ na 1.3 GHz gbakwunye ihe ga-abụ 1 GB nke RAM. Nchekwa ahụ na-anọ na 16GB, yabụ anyị nwere ike ịmalite ịdọpụta igwe ojii na Foto Google.
Anyị nwekwara Lenovo Tab E8, ọ bụ ezie na ekwesịrị ikwu na ọ bụ mbadamba nkume na gam akporo 7.0 Nougat, ihe enweghị nghọta n'oge ndị a. Anyị nwere Otu RAM, ihe nhazi na ebe nchekwa dị ka Tab E7. Kedu ihe dị iche bụ ihuenyo nwere akụkụ nke 8 sentimita asatọ na mkpebi dị elu: 1280 x 800 pikselụ. Ogo nke igwefoto na-abawanye na 5MP ha na azụ na 2MP n'ihu. Tab E8 mechara kọwaa onwe ya na batrị ruru 4.850 mAh.
Anyị mechara ato nke usoro Tab E, na E10. O nwekwara gam akporo Go Edition n’ime ya, n’ime sọftụwia ahụ. Ihuenyo buru ibu ka a na-akpọ ya n'aha ya iru 10 sentimita asatọ. Kedu ihe ịnọ dị na otu mkpebi dị ka Tab E8. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ nke ọma otu Lenovo si arụ ọrụ yana nkọwa dị iche iche wee nye ndị ahịa ahụ dị ala.
Lenovo Tab E10 nwere mgbawa Qualcomm Snapdragon 210 wee rute 2 GB Ebe nchekwa RAM. Ihe anaghị agbanwe na E8 bụ igwefoto ya na ikike batrị, yabụ na anyị nwere nchịkọta nke ikpeazụ nke mbadamba atọ ahụ na gam akporo Go Edition.
Lenovo Tab M10 na Tab P10 maka ezinụlọ
Atọ ndị gara aga bara uru ịnọ na tebụl n'ime ime ụlọ ahụ, ọ bụ ezie na Tab M10 na Tab P10 dị mma maka ihe a. Ha bụ mbadamba ike dị ike nke zuru oke iji tụfuo ihe niile anyị chọrọ maka ngwanrọ.
Lenovo Tab M10 nwere ihuenyo 10-inch Full HD IPS, mgbawa Qualcomm 450 GHz octa-isi Snapdragon 1.8, 3GB nke Ram na 32GB nke nchekwa nchekwa dị n'ime ya na kaadi microSD. Uru ndị ọzọ bụ okwu okwu stereo Dolby Atmos ya, nke zuru oke maka mgba ọdịnaya ọdịnaya ahụ. Anyi echefughi ibu di nfe na gramu 480 na oke nke 8,1 milimita.
Lenovo Tab P10 nwekwara Android 8.0 Oreo dị ka M10 ma mara ya dị mma karịa, Milimita 7, ma ọ dị ihe dị ka gram 440. O nwekwara otu mgbawa Snapdragon 450, ọ bụ ezie na ọ na-aga 4GB nke RAM na 64GB nke nchekwa dị n'ime. Anyị na-eme ka ihe mkpịsị aka mkpịsị aka pụta ìhè na ọzọ ndị na-ekwu okwu stereo, ọ bụ ezie na oge a enwere anọ karịa nke abụọ na M10.
Ọ bụrụ na ị na-achọ mbadamba maka ezinụlọ na-enye obere àgwà na foto, M10 na-akwado 8MP azụ na ihu 5MP. Ọ na-enyekwa nnukwu batrị iji ruo ikike 7.000 mAh.
Lenovo Tab E7 ga-abata na ọnụahịa nke euro 79 n'ọnwa Ọktọba. Lenovo E8 ga-akwụ ụgwọ euro 119, ọ bụ ezie na ọ bịarutere n'ọnwa a nke Ọgọstụ. E10 dị anya ruo ọnwa nke ọnwa Nọvemba na ọnụahịa nke euro 129. Abụọ ndị ọzọ fọdụrụ, Tab M10 na P10, ga-abata na 199 na 269 euro n'otu ọnwa nke Ọktọba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mbadamba gam akporo » Lenovo ọkwa 5 mbadamba gam akporo ọhụrụ na atọ ịbụ gam akporo Go Edition